DHD Madagasikara : “Misy tetika maloto” | NewsMada
DHD Madagasikara : “Misy tetika maloto”
“Tetikady maloto tsy mendrika hitondra ny raharaham-pirenena io, hanodinkodinana ny saim-bahoaka fotsiny.” Izay ny fanehoan-kevitry ny filoha nasionalin’ny DHD Madagasikara, Rasamoelina Hary Naivo, manoloana ny fikasan’ny fitondram-panjakana hanao fanitsiana ny lalàmpanorenana.
Fanodinkodinan-tsaina io fikarakarana fitsapan-kevi-bahoaka io. Raha manan-kevitra amin’izany ny filoham-pirenena na ny fanjakana amin’izao fotoana izao hoe mila hamboarina ny lalàmpanorenana, tokony hiandry ny fifidianana ho vita izy. Ary amin’izay ry zareo no milaza izay lalàna haroso hitondrana indray ny firenena.
Be dia be no tokony hahitsy ao amin’io lalàmpanorenana io. Tsy ny filazana fa tokony hahitsy izany no entina hanaovana rainazy na tetikady ankolaka hifanaovana fitapitaka eto, araka ny nambarany. Ny tokony ho izy, hisy olona hitondra eto na izay heverina fa hitantana ny fanjakana amin’ny manaraka: izay no mandroso izay heverina hitondrana ny raharaham-panjakana.
Ny ao ambadik’izao hoe fanitsiana lalàmpanornena izao, hatao avokoa ny tetikady hahazoan’io fitondram-panjakana io mandresy amin’ny fifidianana. Izay ilay tetika maloto tsy mendrika.
Mahalala sy mahay mihaino ny hafa amin’izany ve ny mpitondra?